The 30-maalin free Clickfunnels maxkamad waa wax soo saarka qurbaanka ee sale flash a ah.
Waa hab si kor loogu qaado adeegyada ay yihiin horumariyay shaqada oo kala duwan ah qof kasta oo la siiyo fursad ay ku dhistaan ​​gaar ah ay joogaan web on shuruudaha ay.
Qaadashada dalab oo ka mid ah 30 maalinta maxkamadda uu albaabka u furi doono in hosting web buuxa, waxayna jiidayeen iyo hoos page degtey dhisaa, bogagga ka jawaabaan mobile, ururinta badan oo ah arrimo ay ka soo xushaan, A imtixaanka kala / B, upsells hal click, processing bixinta, xubin dublad wado hawlgalka la xisaab-xirka bulshada, iyo sidoo kale dublad lagacna.
Taasi $97 qiimaha adeegyada for free!
Kaalay hadda aad u hesho nuqul ka mid ah Clickfunnels halkan